ရုရှား MMA ကစားသမား ခါဘစ်၏ စိန်ခေါ်မှုအား အမေရိကန် လက်ဝှေ့ကျော် မေဝဲလ်သာ လက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်? - Yangon Media Group
UFC လိုက်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်သူ ရုရှား MMA ကစားသမား ခါဘစ်သည် အဓိကပြိုင်ဘက် အိုင်ယာလန် MMA ကစားသမား မက်ဂရီဂေါ်အား အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်လက် ဝှေ့ကျော် မေဝဲလ်သာအား စိန်ခေါ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ မေဝဲလ်သာက လက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းများအရ သိရသည်။
ကစားသမားဘဝ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရှုံးပွဲမရှိသည့်အပြင် မက်ဂရီဂေါ်ကိုပါ အနိုင်ရရှိထားသည့် မေဝဲလ်သာသည် လက်ရှိအချိန်တွင် ပုံမှန်လေ့ကျင့်မှုများနှင့်အတူ အနားယူလျက်ရှိနေပြီး ခါဘစ်၏ အံအားသင့်ဖွယ် စိန်ခေါ်ကမ်းလှမ်းမှုအား လက်ခံရရှိခဲ့ ပြီးနောက် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ရန် နှုတ်အားဖြင့် သဘောတူညီမှုရရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
ယင်းအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မေဝဲလ်သာက ခါဘစ်၏ စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံကြောင်း၊ မက်ဂရီဂေါ်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ဖူးသူနှစ်ဦး၏ အားပြိုင်မှုအား တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တောအလယ်တွင် ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံသလို အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ် လာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားက သတင်းစာဆရာ အသတ်ခံရကြောင်း ထုတ်ဖော်ဝန်ခံရန် စီစဉ်နေ ဟုဆို
အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ တစ်ကျော့ပြန် ခြေချရန် ရိုးမားတိုက်စစ်မ?
ငွေကြေးကြောင့် မန်စီးတီးကိုလိုက်မီရန်ခက်ခဲဖွယ်ရှိဟု မော်ရင်ဟိုသုံးသပ်
NCA လက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့များအကြား စာချုပ်ချိုးဖောက်မှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပေးရန် တိုင်ကြားစာပေါင်း ၄??
ဝန်ကြီးဌာနအသစ် တိုးချဲ့ခြင်းသည် အကျိုးနှင့် အချိန် ရှိ၊ မရှိ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် လိုဟုဆို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ တော်ကို နှစ်ရက်တိုင် တိုင် ကျင်းပမည်
မြန်မာ-တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်း(ယာယီ) ဖွဲ့စည်းရေးဆွေးနွေး၊ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ရွေးချယ်